Okenye ndị okenye
Bgba ígwè obodo
Kpakọba ịnyịnya ígwè
Bgbọ igwe ugwu
Igwe igwe snow
Bmụaka ịnyịnya ígwè
Ebube igwe kwụ otu ebe
Freestyle ịnyịnya ígwè
Uringga njem igwe kwụ otu ebe
Otu esi edozi igwe
Oge ụlọ akwụkwọ, were gị ịhọrọ igwe kwụ otu ebe
Kedu uru nke anụ ahụ ịgba ịnyịnya?
Gịnị mere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu ji ihe eji arụ ọrụ?
site ha na 21-07-09
Ihe a na-akpọ ihe na-adọrọ adọrọ na-eme ka a na-eme ka ihu na-eme ka a ghara ime ya. Iji mee ka ndị na-agba ịnyịnya ugwu nwee ahụmịhe ịnya ịnya ịnyịnya na-aga n'okporo ụzọ ma na-aga n'okporo ụzọ, a na-enye ndụdụ ihu na-atụ ụjọ. Ebe ọ bụ na ya developmentme ...
Kedụ ka igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu nwere ike ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ma chekwaa mbọ?
Have nwere echiche efu na igwe kwụ otu ebe dị arọ ma ọ naghị adaba na ịnyagharị kwa ụbọchị, naanị na ọ bara uru n'okporo ụzọ ugwu? N’eziokwu, o nwere ike ịbụ na i jighị ya nke ọma. Skillsgba ụgbọ ịnyịnya Họrọ ọnụọgụ ezé kwesịrị ekwesị maka ike gị, ma hapụkwa ụkwụ na oke ...
Kedu otu esi ahọrọ igwe igwe igwe?
Nke mbụ, ị ghaghị ịghọta nhazi ọkwa nke igwe kwụ otu ebe. Ugwu igwe ugbua, na-ekpe ikpe site na ejiji ejiji n'ime afọ iri gara aga, nhazi ndị ọzọ na-agụnyekarị: XC, Trail, AM, DH, FR edemede ise a. Site na isi edemede ise a, ọnụọgụ ...
Live na agbasa ozi na Alibaba
Taa bụ Wednesde. Anyị mere mgbasa ozi na-aga n'ihu n'ọfịs. Isiokwu ndụ bụ uru nke igwe kwụ otu ebe. Mgbe anyị na-agakarị igwe kwụ otu ebe, ụfọdụ na-eche na nkasi obi na-agba ịnyịnya dị mma nke ukwuu, ụfọdụ anaghị enwekwa ntụsara ahụ. Ya mere gịnị kpatara ya? Na okwu a, anyị na-eduzi ...
Nloghachi nke Mmetụta Na-ere Ọkụ — The Tour de France China Series National Circle Race • Shanghai Lingang New Station Station gara nke ọma
Na May 30, 2021, Tour de France China Series National Circle Race • Shanghai Lingang New Station Station nwere ihe ịga nke ọma ma mechaa nke ọma. The Tour de France bụ ụwa a kasị mara amara ịnyịnya ígwè egwuregwu n'obí ika. O sitere na France ma nwee ogologo oge nke 116 ee ...
2021 S11 Schmid mebiri iji merie Bernal iji meziwanye uru uwe elu pink
Dika otutu ndi oru maka ime njem nke obodo, ikike na mkpa ndi ozo na abawanye, otutu ebumnuche, mmezu zuru oke nke ugbo ala bu ihe ndi o choro choro, obughi nani na i gha ezute ka ikweghi igbochi gi n'obodo, kamakwa ka i buru ihe di nfe ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, nwee ahụmahụ na-akpali akpali na ugwu ọchị ....
2021 China International Bicycle Exhibition-- ụlọ ọrụ isiokwu
site ha na 21-05-08
Na May 5-8, 2021, a ga-eme 30th China International Bicycle Exhibition na Shanghai New International Expo Center (Pudong) na isiokwu nke "mmeri mmeri maka ma mmezi ụlọ na nke mba ọzọ". Ngosipụta China a ga-edozi ntọala maka ụwa abụọ-w ...
Kedu otu esi ahọrọ ogologo crank maka ịnyịnya igwe gị ugwu?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị na-azụ ahịa ole na ole ga-atụle ogologo ọsọ nke igwe kwụ otu ebe, mana ogologo crank kwesịrị ekwesị ga-ewetara onye na-agba ịnyịnya obere ihe ịtụnanya. Dị ka ihe atụ, ọ nwere ike ime ka ikike onye ahụ na-agba ịnyịnya ígwè dịkwuo elu ma ọ bụrụ na ọ na-agbago ma mee ka ọ nwekwuo ikike. The crank ogologo nke 170-175mm ...
Kedu otu esi ahọrọ breeki breeki dị gị mma?
Ochie ochie "You ga - agbatị ọsọ ọsọ dịka ị nwere ike ịkwụsị" yiri mgbaaka n'eziokwu. Mgbe ị na-ezute oyi na ihu igwe ihu igwe, ọ bụ oge zuru oke iji nwalee arụmọrụ nke igwe. Isiokwu a na-ewebata njiri mara dị iche iche nke igwe kwụ otu ebe, ka ị nwee ike ịhọrọ nke ...
Na 2021, Tianjin panda Technology Group ọhụrụ ịnyịnya ígwè Industrial Park ga-amalite n'oge adịghị anya. Biko lee anya ya
Nzukọ nzukọ nkwalite mgbasa ozi mbu emere na Shijiazhuang, isi obodo nke Hebei Province na Eprel 21, 2021 onye isi njikwa anyị, osote onye isi njikwa na ndị nnọchi anya azụmahịa abụọ pụtara ìhè bịara nzukọ a. Nzukọ a tumadi na-atụle anyị isi ngwaahịa, ulo oru ogige p ...
Gịnị mere ịnyịnya obodo ji ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya? Enwere ihe kpatara ya!
Site na imepụta na mgbasawanye nke ọgwụ mgbochi, ọnọdụ ikuku nke ọnọdụ zuru ụwa ọnụ ebelatala. Na 2020, mbupụ nke igwe na-arịwanye elu, na-aghọ ngwaahịa na-ekpo ọkụ na 2020. Na mbu, mbupụ nke ịnyịnya ígwè ga-akwụsịlata na 2021, mana ọchịchọ a na 2021 ka na-adịghị mma ...
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n’etiti igwe kwụ otu ebe na ọnụ ahịa dollar iri, ọtụtụ narị dollar na puku kwuru puku
Anyịnya igwe nwere ọtụtụ iri, ọtụtụ narị dollar na puku kwuru puku. Ihe niile bụ ịnyịnya ígwè. Gịnị kpatara enwere nnukwu ọdịiche dị? Ọ bụ ezie na ha niile bụ igwe, nhazi igwe kwụ otu ebe dị iche. Igwe nwere nhazi dị iche iche dị iche iche na ịnya. Na t ...
Ekwentị: + 0086-18033751616
Gịnị mere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu nwere ...
Kedụ ka igwe kwụ otu ebe nwere ike ịgba ọsọ ọsọ na sa ...
Nloghachi nke Mmetụta Na-ere Ọkụ — njem nleta d ...